Mozilla dia nanambara ny telefaona voalohany miaraka amin'ny Firefox OS ho an'ny mpandroso | Avy amin'ny Linux
Mozilla dia nanambara ny telefaona voalohany amin'ny Firefox OS ho an'ny mpamorona
Mozilla fotsiny manambara ny telefaona voalohany miaraka amin'ny Firefox OS, saingy natao ho an'ireo mpamorona izay te-hizaha ireo rindranasa voalohany amin'ny tontolo tena izy ireo Firefox OS.
Ny zavatra lehibe momba ireo finday ireo dia ny HTML5 ihany no ahafahantsika miditra amin'ireo finday rehetra, ankoatr'izay, HTML5 ho fenitra dia miantoka fa ny cross-platform dia tsy mifamatotra amin'ny mpanamboatra na sehatra fotsiny.
Ireo finday vaovao dia mitondra ny anarana Keon y Peak, ny afovoany voalohany ary ny farany avo lenta. Izy ireo dia novolavolain'i Geeksphone miaraka amin'ny Telefónica.
Qualcomm Snapdragon S1 1Ghz processeur
3,5, fampiratiana HVGA Multitouch
Fakan-tsary aoriana 3-megapixel
MicroSD, Wifi N, sensor ary jiro akaiky, G-Sensor, GPS, MicroUSB
Bateria 1580 mAh
Fanavaozana ny OTA
Maimaimpoana, afaka manampy SIM ianao
Qualcomm Snapdragon S4 dual-core 1,2 Ghz processeur
4,3 ″ efijery qHD IPS Multitouch
Fakan-tsary 8MP aoriana, fakan-tsary voalohany 2MP
MicroSD, Wifi N, sensor jiro sy akaiky, G-Sensor, GPS, MicroUSB, Flash
Ny teboka iray hafa dia ny manaja sy miaro ny tsiambaratelon'ny mpampiasa azy i Mozilla. Ao amin'ny Firefox OS dia tsy mila matahotra ianao raha mitsikilo anao ny orinasanao na mamonjy ny mombamomba anao amin'ny mpizara azy hivarotra izany amin'ny antoko fahatelo.
Fantatra fa ho tonga amin'ny volana febroary ireo finday ireo, saingy mbola tsy fantatra ny vidiny. Tsara ny manazava fa tsy ireo telefaona natokana hividianana ny sarambabem-bahoaka ireo, mbola tsy fantatra ireny hoe rahoviana no hisy. Nolazaina fa tsena tsara dia i Brezila, satria tsy misy Android na iOS mifehy ny tsenan'ny smartphone, fa averiko ihany, kely ny fantatra momba ny fizarana finday amin'ny Firefox OS ho avy eo rehefa vonona 100% ny rafitra. %.
Mpanoratra ny lahatsoratra: Jacobo Hidalgo Urbino (aka Jako) avy amin'ny fiarahamonina olona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Mozilla dia nanambara ny telefaona voalohany amin'ny Firefox OS ho an'ny mpamorona
Naniry mafy ny hanana finday miaraka amin'ny Firefox OS izy ... Efa ela no niandrasako azy ...
Misaotra tamin'ny fampahalalana .. ..ary azafady fa tsy afaka miditra amin'ny humanOS aho ..
Eny, mbola te-hanana zavatra amin'ny FirefoxOS ihany aho hehe.
Eny ... mahamenatra fa tsy misy afa-tsy IP IP avy any Cuba ny humanOS.uci.cu, fetra tsy azonay na ry zalahy avy amin'ny humanOS, fa tsy misy hafa ... 🙁
Hatramin'ny nahatongavako teto dia nanontany tena foana aho hoe, Manao ahoana daholo ianareo? Tsy menatra ny tsy fahalalako aho. 😀
Ah, tena tsotra ... ny mipetraka any Cuba (izaho sy i elav), tahaka ny ipetrahantsika eto satria ny IP-anay dia avy any Cuba, ka avela hiditra amin'ny humanOS izahay.
Satria ny ankamaroan'ny zavatra navoakan'izy ireo dia tena mahaliana, izany no antony andraisanay maro ny anjara birikiny ary zarainay eto, mba hahafahan'ny internet manontolo mamaky azy ireo 🙂
Nooo, ny tiako holazaina dia hoe ahoana no ahitantsika azy ireo?
Ah, tsara, misy olona iray avy eto Kiobà izay manana mpizara miaraka amina tena IP (izany hoe, manoloana ny internet) dia tsy maintsy nanao dika mitovy amin'ilay tranonkala ary mampiseho izany amin'ny olona rehetra amin'ny internet, izay saika tsy azo atao satria tsy fahita firy ny fananana fitaovana toy izany.
Fomba iray hafa ny olona iray manana izany, mpizara eto Kiobà fa amin'ny Internet, avelany hifandray amin'ny mpizara amin'ny alalàn'ny SSH izy ireo ary avy eo hivezivezy amin'ny alàlan'ny SOCKS5 ary hiditra amin'ilay tranokala, izay azonao idirana satria hanana IP avy any Cuba ianao (ny IP avy amin'ny mpizara).
Na izany na tsy izany dia tsy azo inoana loatra ny hahavitantsika azy 🙁
Hehe, tsy misy anadahy, ahoana no ahitantsika izany rehetra izany? hitsidika an'i Fromlinux? Fa kosa, ahoana no ampisehoanao ny tenanao? Miala tsiny raha tsy nanazava tsara ny momba ahy aho 🙂
AAHHH !!!! Eny eny 😀
Tsy misy na inona na inona, satria nyLLLinux tsy misy mpizara ao Kiobà, tsotra be io that
Izy io dia mpizara iray izay fehezin'ny politikantsika (ny an'ny DesdeLinux), fa tsy ny an'ny talen'ny talen'ny governemanta na ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta 🙂
Ahaha, misaotra tamin'ny valiny. Amin'ny ankapobeny ny valiny foana no tsotra indrindra. Miarahaba ... 😀
hahahaha tsara eny, niafara tamin'izay ny LOL tsotra indrindra !!
Hisy ny rel rel, na ny ssh ho an'ny zazalahy!
«Hanao izy ireo» hoy aho, biby inona !!! XD
… Fitsapana ny fanohanan'ny ElementaryOS an'ny tranonkala.
Tsy misy na inona na inona, manampy fotsiny ny fanohanan'ny detection ElementaryOS amin'ny hevitra sy widget amin'ny widget
Manantena aho, OS OS.
Ny marina dia ny Ubuntu for mobiles dia mampanantena zavatra maro hafa amin'ny resaka fanavaozana sy ny fampandrosoana ... indrindra raha miresaka momba ny fotony atolotray ho an'ireo mpamorona sy ireo safidy izy.
Toy ny, ary raha ny fampifanarahana no ampanantenain'izy ireo, dia iray ssh miala amin'ny fifandraisana amin'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny fampiononana apt-geting ireo fonosana tadiavintsika.
Antenaiko fa afaka mametraka ny sary amin'ny Galaxy S aho, manahy mafy aho 😀
Argen77ino dia hoy izy:
Nofinofiko ny andro ahafahako mametraka telefaona ubuntu na firefox os amin'ny findaiko satria miady amin'ny android aho
Valiny amin'i Argen77ino
Tsy haiko ny antony, fa na ny Ubuntu Phone na ny FirefoxOS dia tsy nahasarika ny saiko, ary ezahako izay zavatra tonga amiko: /
Mikaikaika aho hanandrana azy!
Hamarino raha misy na fisie misy na tsia (ary bebe kokoa) miaraka amin'ny loop IF
LibreOffice 4.0 dia hanatsara ny endrika ivelany sy ny asany